Ndeupi mutsara wemutsa unofanirwa kutevedzera "Pending…" chimiro?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Dec 3, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Ruremekedzo kune nyanzvi email: "pending"
Hunyanzvi hwekunyorerana tsamba hunogona kudzidzwa. Ichokwadi kuti pane kufanana kukuru pakati pemutumwa nea mail mail. Zvisinei, mimwe misiyano inoramba iripo. Iyo njodzi inogoneka yekutumira zvikanganiso zvaunowanzo kuita mumamail ako padanho retsamba dzako yakakosha. Kana tikashandisa mutsara wekuremekedza wekuti "Pending ...", sarudzo yemutsara unofanirwa kutevera haisi yemahara. Tsvaga, mune ino chinyorwa, yakakodzera fomula ine hunhu.
Hunhu hwemutsara wekuremekedza "Pending ..."
"Ichimirira chibvumirano chako ...", "Ichimirira mhinduro yako ...", "Ichimirira mhinduro yakanaka kubva kwauri ...". Aya ese mazwi ane hunhu anogona kushandiswa zvakare mutsamba semu a tsamba nyanzvi.
Nekudaro, mutsara wekuremekedza "Pending ..." unofanirwa kuteverwa nechidzidzo. Izvi zvinotsanangurwa nenyaya yekuti iapposition. Chero imwe nzira yekuenderera nayo haina kunaka.
Paunonyora, semuenzaniso, "Ichimirira mhinduro yakanaka kuchikumbiro changu, gamuchira Mr. Director, kutaura kwekutenda kwangu kwakadzama", kunyatsotaura, hapana nyaya. Dai taizotsvaga imwe, taizowana mugamuchiri wako, izvo zvese zvinoita sezvisina musoro, zvichipihwa kuti ndiwe wakamirira kwete mutori wako.
“Pending…”: Nderipi mutsara wekupedzisa?
Asi, mazwi akarurama ndeaya anotevera: "Ichimirira mhinduro yakanaka kuchikumbiro changu, ndapota gamuchirai, VaMutungamiriri, kutaura kwekutenda kwangu kwakadzama" kana "Kumirira kugamuchira chibvumirano chako, ndapota gamuchira kuvimbiswa kwekufungisisa kwangu kwepamusoro ".
VERENGA Nzira yekuita sei kubudirira kwemaitiro ayo?
Pamusoro pezvo, zvichave zvakakoshawo kuve nechokwadi chekuti pane kuwirirana pakati pefomura yekukwidza uye yekupedzisira fomula. Saka, paunotaura semuenzaniso, "VaMutungamiriri" mukukwidza, chirevo chekupedzisira chinokodzera izvi: "Ichimirira mhinduro yakanaka kuchikumbiro changu, ndapota gamuchira, VaMutungamiriri, kutaura kwemanzwiro angu akazvipira zvikuru ".
Chero nzira, tsamba kana tsamba inofanirwa kutariswa. Yakakosha bhizinesi email inosangana nezvinodiwa zvakafanana. Iwe uchawana zvakawanda kubva pakuongorora kuti ugadzirise chero kukanganisa kwezviperengo kana girama. Izvo ndezvekuvimbika kwako uye kwebhizinesi rako.
Kunyangwe zvichigoneka kushandisa matauriro aneruremekedzo akafanana nevanotakura zvinhu. Iwe unogona zvakare kushandisa mapfupi mafomula akadai sekuti "Vanovimbika", "Vanovimbika", "Vanovimbika" kana "Vanoperera". Chero zvazvingava, iwe unofanirwa kudzivirira zvipfupiso zvakaita se "Cdt" zvehunyoro kana "BAV" yako.
Chimwe chinhu chekudzivisa, emoticons kana kunyemwerera. Kana maitiro aya achiwanzoitika mukutumira mameseji, chokwadi chinoramba chiripo chekuti haana kukodzera maemail ehunyanzvi.
Ndeupi mutsara wemutsa unofanirwa kutevedzera "Pending…" chimiro? Zvita 9th, 2021Tranquillus
pashureMatauriro anehuremekedzo ekudzivirira mune email yehunyanzvi
zvinoteveraCyber ​​​​Dambudziko: muunganidzwa wemadhairekitori ekudzidziswa, kubata uye kutaurirana
Email Template yekudaidzira
Ndeupi rudzi rweruremekedzo rwekutumira kutenda mune email yehunyanzvi?